Author: Temi Nasar
Qoraasuma Jaalalaa Community Organization. Galmee Jaalala Dhugaa” Song. Maatin koo baayye nati dheekamu dhoorku 7. Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye. Yaada garaa koo wajjinis si qofatu ‘chat’ gochaa oola. Ija kootu guyyaa hamtuu tokko sirra bu’e! Kan borii immoo Waaqayyotu beeka! Kanarraa kan ka’e hanga har’aatti guyyaa dhufaa darbaa fagootti utuu wal dharraanuu jiraanna! Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute!
Erga dubbiftan booda ‘like’, ‘share’ ‘comment’ godhuu hin dagatinaa.
Hanga amma maalif kophummaan jiraate jaalale malee? Jaalallee ishee duraanii mucaa ishee kana ilaaltee itti dagatti. I tiif naannoo Gimbiitti!. Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Fayyaa fi Jaalala featured Jaalala.
Namni kamuu kabaja jaalalaaf qabuun jireenyi isaa miidhaga yookaan fokkata. Sections of this page. Sitti dhufuuf hangam turullee walarguun kenya hin oolu! Guca maalummaa kootii See More. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan Dec 12, All Aadaa Bashannana Viidiyoo. Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane. Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati.
Walaloo, Asosama, Icciitii Jaalalaa Library. Gorsa koo kana hunda immoo ‘upload’ gootee ‘wall’ kee irratti akka mul’istu abdiin qaba.
Dhugaadha baay’een si jaalladha! Namni jaalalaaf si gaafachuu yaadaa jiru kami Email or Phone Password Forgot account?
Akkan jiruttu Numaan Jira Obsee. Gammachuu guddatti kan nama geessu jaalala dhugaati. Miidhaafi hubaatii irraas kan nama tiksu isuma jaalala dhugaati.
Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Rakkoo Lixa Dhuga falli raayyaa ittisa biyyaati Nov 30, Andualem Befikadu Demelce Personal Blog. Ani sirraa addaan bahuun koo hedduu na rakkise.
Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Iji koo erga si argee kunoo bubbuleera! Abbaan manaa ishee ammaa kun faallaa jaalallee ishee isa jalqabaati.
Oromiyaa keessatti barnoonni sad. TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti Oct 1, Maal hojjetta hiriyaa koo nageenyi badhaadhaa? Bareedun ani barbaadu hanga amma hin dhalanne 6. See more of Galmee Jaalala Dhugaa” on Facebook.
Waanuma fedheefuu hiriyyoota kee warra kottu magaalaa keessa deemna jedhanii’invite’ si godhan immoo hin dhaggeeffatiin.